mutsauko pakati pekuti iterative uye inowedzera kukura mukubata
Kuru Agile Musiyano Pakati peIterative uye Kuwedzera Kwekuvandudza muAgile
Musiyano Pakati peIterative uye Kuwedzera Kwekuvandudza muAgile
Mukubudirira kwesoftware budiriro, ndeupi musiyano uripo pakati pekusimudzira uye kuwedzera kukura? Izvo zvakafanana here? Ndeupi musiyano uripo pakati pemazwi maviri aya?
Kutanga, ngatitarisei kutsanangurwa kuri nyore kwemazwi maviri aya:
Kuwedzera - kuwedzera kutsva mashandiro mune zvidiki zvidiki
Iterative - kuita kakawanda, i.e. kuwedzera mashandiro matsva mukudzokorora kana kuita cyclic nzira
Kubva Wikipedia :
Kukura kwekutanga kwakagadzirwa semhinduro kune kusakwanisa uye matambudziko anowanikwa muropopoma.
Pfungwa yekutanga kuseri kweiyi nzira ndeyekuvandudza sisitimu kuburikidza nekudzokorora macircuit (iterative) uye muzvikamu zvidiki panguva (inowedzera), ichibvumira vanogadzira software kuti vatore mukana weizvo zvakadzidzwa panguva yekuvandudzwa kwezvikamu zvekare kana shanduro dzesisitimu. Kudzidza kunouya kubva mukuvandudzwa uye kushandiswa kwesisitimu, pazvinogoneka nhanho dzakakosha mukuita dzinotanga nekumisikidza kuiswa kweeseti yezvinodiwa zve software uye iteratively kusimudzira shanduko dzinoshanduka kudzamara iyo yakazara system yaitwa. Pane imwe neimwe iteration, dhizaini yekugadzirisa inoitwa uye nyowani mashandiro emabasa anowedzerwa.
Mukuwedzera kwekuvandudza, mashandiro ehurongwa akachekwa kuita mazamu (zvikamu), umo mune imwe neimwe yekuwedzera, chidimbu chekushanda chinounzwa.
Pfungwa yese ndeye kuendesa iyo 'inoshanda' vhezheni yechinhu (zvisinei ishoma) kune vashandisi kuti tikwanise kuwana mhinduro munguva pfupi mukuita. Enzanisa izvo nekuvaka chinhu chakazara chinoshanda kwemwedzi mishoma, chete kuti uone kuti icho chakavakwa hachigone zvido zvevashandisi.
Iterative uye Kuwedzera Kwekuvandudza
Ngatione muenzaniso wekuti iterative uye inowedzera kukura uye kuendesa kunoshanda sei mune isingagone mamiriro.
Ngatiti iwe unoda kuwedzera nyowani yekuita basa kune webhusaiti, uye iwe wafunga kuti iwe unoda kugadzira izvi uchishandisa agile nzira, uchishanda mumavhiki maviri ekuendesa macircuit (iterations).
Iyo zvishoma inoshanda vhezheni yeiyo login mashandiro akakosha kuendesa kune vashandisi angave
Gadzira peji rewebhu uko vashandisi vachazoona fomu rekupinda
Wedzera fomu yekupinda neminda miviri chete (zita rekushandisa nephasiwedi) uye bhatani rekupinda, i.e. kwete Kugadzira kana kusimbisa
Gadzira peji 'yekutambira' saka kana vashandisi vapinda, vanozoona meseji.
Iyi ndiyo yekutanga vhezheni (inoshanda asi yakaganhurirwa mukushanda) yesoftware yakapihwa iteration imwe. Ichi chinhu chekutanga chekupinda chakapfuura nepakati pekugadzira, kusimudzira, uye kuyedza uye kununurwa kumagumo eiyo iteration.
Mune inotevera iteration, isu tinoda kusimudzira iko iko kushanda kweiyo yakavakwa mune yekupedzisira iteration. Tinogona kusarudza kuzviita
Vaka mitemo yekusimbisa yakatenderedza paramende yekuisa
Wedzera imwe CSS kuitira kuti fomu yekupinda iratidzike yakanaka
Ratidza meseji kana mushandisi achiedza kupinda nemazita asiri echokwadi
Iye zvino isu takawedzera nyowani uye tavandudza huripo mashandiro. Mune mamwe mazwi, isu tine kuwedzera iko kuripo kwekuita basa, uye takaita saizvozvo mune ino iteration.
Mune iteration matatu, tinogona zvakare kuwedzera mashandiro edu ekupinda, nekuwedzera
Kanganwa password kushanda
'Ndirangarire' bhokisi rekutarisa
Redirection mashandiro ekudzosera kune akakodzera mapeji kana vashandisi vapinda mukati (pane kungo 'gamuchira' peji rakagadzirwa mune yekutanga iteration)
Sezvauri kuona, mune yega yega iteration, isu takawedzera iyo yekuita mashandiro nekuwedzera mitsva inobatsira zvinhu kune vashandisi. Nekudaro, isu tinokwanisa kuwana nekukurumidza mhinduro kubva kune vashandisi kuti tikwanise kuwedzera kana kuwedzera mashandiro ayo.
Kupfuura akati wandei iterations, isu pakupedzisira tinopa izere mhinduro.
yakasviba modhi vs light mode
iphone 5c inosimudzira nharembozha
Iyo YouTube pikicha-mu-pikicha yekunyepedzera iri kushanda zvakare paIOS 14.5 beta
Maitiro ekudzima Samsung & apos; s spammy Galaxy Apps Notices pane chero Galaxy S kana Cherechedzo modhi
LG V20 mutengo uye zuva rekuburitsa
Chipo chemitengo yeApple iPhone 5s uye Apple iPhone 5c paAT&T uye T-Mobile inoratidzwa
Akanakisa Apple iPhone 6s akawedzera mabhatiri kesi
Star Wars: Hunters nharembozha yakaratidzwa, ichiuya kuApple uye iOS muna 2021